Car Rental – MKK Business Group
MKK Business Group
Nay Pyi Taw Car Rental Services
နေပြည်တော် သို့ ကြွရောက် လာ သော လူကြီး မင်းများ အတွက် ဈေးနှုံး အသက်သာဆုံးနှင့် .၀န်ဆောင်မှု အကောင်းဆုံး ဖြစ် အောင် .. M.K.K. Car Rental မှ တာ ၀န်ယူ လက်ခံ ဆောင် ရွက် ပေးလျှက် ရှိပါ တယ်..။ မြို့တွင်းနယ် ဝေး ၊ လချုပ် နှစ်ချုပ် များ ကို NGO များ အတွက် .သီးသန့် လက်ခံ ဆောင် ရွက် ပေး လျှက်ရှိ ပါ သည်..။
လေဆိပ် ကြို ပို့ ၊ကားဂိတ်ကြို ပို့ ။ ရုံးတက် ရုံးဆင်း ၊အစည်းအဝေးအတွက် လိုအပ်သောကားများကို ငှားရမ်းနိုင်ပါသည် ။
လချုပ်နှစ် ချုပ်များ အတွက် ကားမျိုးစုံ ငှား ရမ်းနိုင်ပါသည်။(ယာဉ်မောင်း ၊ဆီ ) အပါ ။
Full day , Half day – အချိန် ပိုင်း အတွက် လည်း ကားမျိုးစုံ ၊ ငှားရမ်းနိုင်ပါသည်။
ပြည်တွင်း ၊ပြည်ပ NGO များ အတွက် ရုံးသုံးကားများ ကိုလည်း ညှိနိုင်းဈေး ဖြင့် လက်ခံ ဆောင်ရွက် ငှားရမ်းပေးပါသည်။
Without driver. မငှားပါ ။
ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းစတင်တည်ထောင်လုပ်ကိုင်စဉ်ကဂျပန်ကုမ္ပဏီနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းနေရာအနှံ့အပြားခရီးစဉ်အနီးအဝေးအလိုက်ကားအငှားလုပ်ငန်းကိုမော်တော်ယာဉ်(၂)စီးဖြင့်စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာ၂၀၁၁ခုနှစ်အကုန်ရောက်သောအခါတွင်မော်တော်ယာဉ်(၄)စီးအထိတိုးမြှင့်လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ပြီးကားအငှားဝန်ဆောင်မှုတစ်စထက်တစ်စတိုးတက်အောင်မြင်လာခဲ့သောကြောင့်၂၀၁၃ခုနှစ်တွင်မော်တော်ယာဉ် (၈)စီးအထိတိုးမြှင့်လုပ်ကိုင်လာနိုင်ခဲ့ပါသည်။ဤသို့ဖြင့် လုပ်ငန်းများသည် အောင်မြင်မှုနှုန်းမြင့်မားလာကာ ၂၀၁၅ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ကားအစီးအရေအတွက် (၂၅)စီးခန့်ရှိလာကာ ရန်ကုန်(၆)စီး နေပြည်တော်(၁၁)စီးနှင့် ကျန်ကားများကိုလည်းအခြားမြို့များတွင်အလျဉ်းသင့်သလို ထားရှိလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ယာဉ်မောင်း(၂၇)ဦးခန့်ဖြင့် ကားအငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းကို အောင်မြင်စွာ လည်ပတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။မော်တော်ယာဉ် ဖြန့်ချဲ့ထားမှု အခြေအနေအား နောက်ဆက်တွဲ(က)ဖြင့် ဖော်ပြထားပါသည်။
၂၀၁၈ခုနှစ်တွင်Swan HtetKyaw Car Rental Service အမည်ဖြင့်ကားအငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းအားထပ်မံတိုးမြှင့်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာယခုအခါ Minami KankooCo.,ltdအနေဖြင့် MKK Car Rental Service နှင့် Swan HtetKyaw Car Rental Service ဟူ၍ကားအငှားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း(၂)မျိုးဖြင့်အောင်မြင်စွာလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
Pa.194,Thapyae Gone Shop House,Nearly by Khine Li Restaurant,Ingine Street,Nay Pyi Taw.